Wallootti boba'aan lafa jalaa burqe jedhamuun hagam mirkana? - BBC News Afaan Oromoo
Wallootti boba'aan lafa jalaa burqe jedhamuun hagam mirkana?
Oduun Wallootti boba'aan lafa jalaa burqe jedhu marsaalee hawaasaa irratti haasa'amuu erga eegalee bubbuleera. Gariin namaa suuraafi ragaalee biraan dabaalee dubbata.
Walloo Kibbaa aanaa Laga Hidhaatti bilbille ogeessa komunikeeshinii aanicha kan ta'an Obbo Tamasgeen Asaffaa dubbifnee turre.
Qaamaan achitti argamee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffadheera jedhu Obbo Tamasgen.
Boba'aan kun kattaa baqaqsee lafa jalaa burqee gara laga Machaalaa naannichatti argamuutti yaa'aa jiraachuus nutti himaniiru.
'Tarkaanfiin mootummaa saba tokko qofarratti kan xiyyeeffatedha'
Dubartii dhiironni niitii lammataa fuudhan akka danda'an murteessitu
Suuraa fi viidiyoodhaan ragaa of harkaa qaba kan jedhan Obbo Tamasgeen boba'aa ta'uusaa tokko lamaan dubbatu.
''Boba'aa yaa'u sana irraa waraabnee abidda yommuu itti qabsiifnu ni boba'a.''
"Lammaffaa jirattotni qaruuraa pilaastikaan waraabbataa turan, sadaffaa ammoo fagootti foolii boba'aa qaba'' jedhu Obbo Tamasgeen.
Kuufamni boba'ichaa argame kan jedhame ganda duwwaa kudhan bakka addaa mana barumsaa Goraannaatti dhiyoo jirutti.
Naannichi gammoojjummaa kan qabu yoo tahu magaalaa aanittii Ambaa irraa miillaan sa'a tokko deemsisa. Teessumni lafaa naannicha bu'a bahii qaba.
Mootummaan quba qabaa?
Daarikteerri komunikeshinii Ministeera Albuudaa fi Boba'aa Obbo Mikaa'el Mangashaa, dubbichi ni ukukubsame malee boba'aan burquun isaa mirkanuma jedhan.
Haa tahu malee oduun yaa'ee dhangala'aa jira jedhamu ol kaafamee odeeffameera jedhan.
Kan argame boba'aa tahu garuu ogeessonni keenya yeroo lamaa sadi achi deemanii mirkaneessaniiru jedhan.
Ministeerichatti ogeessa olaanaa kan ta'an Dr. Qatsalaa Taaddasaa, "akka jedhamu osoo tahee xiqqooma akka qotuu goonee hin baasnu turree" jechuun gaafatu.
Hanqinni nyaata madaalawaa daa'imman Yaman haalaan hammaate
Kibba Wallootti argame kan jedhame kun waggota dheeraa kan lakkofsisedhas jedhan.
Itoophiyaan boba'aa barbaaduu erga jalqabdee waggootni 70 ol dhamaatiidhaan darbaniiru jechuun kan Ogaadeeniin ala kan milkaa'e akka hin jirres himaniiru.
Warra boba'aa barbaadaniif eeyyamni yommuu kennamu jalqaba waggaa afur sana booda yoo waanti gaariin argamee isaanis nuuf haa dheeratu jechuun gaaffii dhiyeessan wagga lama lamaan walumaagala waggaa saddeetitu kennamaaf jedhan Dr Qatsalan.
Kuufamni boba'aa gahaan jiraachun mirkanaa'ee yoo bu'a qabeessummaa ni qabaata ta'e qofa gara qotanii baasuutti galu jedhu.
Kuufamni boba'aa jiru yoo gahaa miti tahes baasiin barbaachaaf bahe ni gubata jechuudha jedhan.
Walloo Kibbaa naannoo amma boba'aan burqe jedhame kanatti kaampaniin biyya Ingilaand Faalkan jedhamu boba'aa barbaacha hedduu dhama'eera. Ta'us sababa maallaqaatiin itti hin milkoofne jedhu Dr. Qatsalaan.
"Lafti isaa akka kan naannoo Somaalee diriiraa osoo hin taane, bu'aa bahii qaba. Kun ammoo maallaqa hedduu gaafata, Faalkan ammoo maallaqa sana hin qabu ture. Waggoota afur booda naannicha gadi dhiisee deeme."
'Callifamee hin ilaalamu'
Dr. Qatsalaafi waahillan isaanii kutaa walloo kanatti deddeebi'anii jiru. qorannaas keessatti hojjetaniiru.
Dhimmichi waan callifame bira darbamu miti jedhu. Mootummaan akka quba qabuufi, ogeeyyiin qorannoo gochuu akka itti fufan dubbatu.
Haa ta'u malee "boba'aan burqe jechuun lafa sana boba'aan jira jechuu miti, lafa fagoo irraa kan dhufe ta'uu mala" jedhu.
Kun akkamitti ta'uu danda'e waan jedhu yoo ibsan, kattaan volkaanoofi taateewwan Ji'oolojii garagaraan uumamu baqaqaa qabaachuu mala jedhu.
Baqaqaa sana keessaan boba'aan ol burquu danda'a. Ta'us boba'aan jira jechuuf qorannoo hedduu gochuun barbaachisaadha jedhu.
Seeneetiin Ameerikaa ajjeechaa Jamaal Kaashogjiif ammas deebii Sawudii barbaada
Kan Walloo kunis akka marsaalee hawaasaa irratti yaa'ee dhangala'aa jira jedhamu ta'uu baatus yeroo dhiyootti kaampaniin tokko naannichatti boba'aa barbaacha ni eegala jedhu.
Wanti Wallootti ta'e kun biyyattiif haaraa miti kan jedhan Dr. Qatsalaan, kanaan dura bifa wal fakkaataan Lixa Ogaadeen lafa Darkallee akkasumas Gannaalee jedhamanitti, Bahaan ammoo Galamsootti akkuma bishaanii boba'aan burqee ture jedhu.
Naannoo tokkootti mallattoon boba'aan jiraachuu agarsiisu erga mul'ate boba'aa sana qotanii baasuuf haal dureewwan hedduun mijatuu qabu jedhu Obbo Mikaa'el.
"Gahumsi teeknoolojii fi maallaqaa kaampanii bobaa'aa baasuu, uumamni kattaa naannichaafi haalli waliigalaa taa'umsa lafaa akkasumas bu'a qabeessummaan isaa murteessaadha" jedhu.
Industirii dibataa fi boba'aa
BBC Dubartoota 100: Dubartii dhiironni niitii lammataa fuudhuu akka danda'an murteessitu
20 Sadaasa 2018
Buqqaatonni 700,000 naannoo Somaalee keessa jiran 'deeggarsa hatattamaa fedhu' - Dhaabbilee gargaraasaa